Allgedo.com » Dowlada Kenya oo ku Gacan Seyrtey Hadal ka soo yeeray Xarakada Alshabaab
Dowlada Kenya oo ku Gacan Seyrtey Hadal ka soo yeeray Xarakada Alshabaab
Dowlada Kenya ayaa sheegtay in aysan wax wadahadal ah la geli doonin koox argagaxiso ah, sida lagu sheegay war ay soo saareen xubno kamid ah xukuumada iyo militariga dowlada Kenya oo ka jawaabayey Digniin Arbacadii uga timid kooxda Al shabaab.
Xarakada Al Shabaab ayaa shalay ku hanjabtay inay dili doonaan dhamaan askarta ka soo jeeda dalka Kenya oo ay gacanta ku hayaan hadii aan lasii deyn dhamaan dadka Muslimiinta ah ee dowlada Kenya u xirtay arrimaha la xariira argagaxisada, iyagoo si gaar ah u codsaday in lasii daayo afar maxbuus oo la sheegay in Kenya ku wareejiysay dalka Ugandha, maxaabiistaasi oo la sheegay inay ku luglaaheey weerarkii bambaano ee Al Shabaab ka fulisay magaalada Kambala sanadkii 2010.
Thuita Mwangi, oo ah xoghayaha Joogtada ah ee Wasaarada Arrimaha Dibada ayaa saxaafadda u sheegay in dowlada Kenya uu u yaal sharci ah inaysan gorgortan la gelin kooxaha argagaxisada ah.
Sidoo kale afhayeenka u hadlay ciidamada Dowlada Kenya Col. Cyrus Oguna ayaa sheegay in dadkii ku jiray filimkii ay shalay soo bandhigeen kooxda Al shabaab ay dhamaantood yihiin rag aan ahayn askar oo aan dagaal ku jirin, wuxuuna ugu baaqay Al Shabaab inay iska soo daayaan dadkaasi ay heystaan. Col.Cyrus Oguna ayaa sheegay in ciidamada Kenya iyo dowlada aysan wax gorgortan ah la geli doonin.
Afhayeenka Militariga Kenya ayaa intaasi ku daray in kooxda Al Shabaab ay sii wado falalkeeda burcadnimo isla markaana danbiyada ay geysanayaan ay yihiin kuwo sharci walba oo caalamka ah qabanayo, wuxuuna ku tilmaamay hadii ay dilaan dadka ay heystaan inay galeen danbi xasuuq ah, isla markaana sharciga lagu qaadi doono.
Kooxda Al Shabaab ayaa labo asbuuc u qabatay in dowlada Kenya ay ku fuliso codsigooda ah in dadka ay codsadeen lasii daayo hadii kale ay dili doonaan lix nin oo u dhashay dalka Kenya oo ay ku heystaan gudaha dalka Soomaaliya.